Rwendo rweMachinda eAfrica eComedy Rinokwidza Kuguta reRudo rwehama
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Rwendo rweMachinda eAfrica eComedy Rinokwidza Kuguta reRudo rwehama
The African Princes of Comedy Tour (APCTour) inokura gore rega rega sezvo makomiki epamusoro eAfrica anosimuka kubva pasirese anoburuka kuzopa mitambo yemhando yepamusoro-soro munyika yose. The APCTour inoenderera mberi neEast Coast Takeover paSA Café & Lounge muPhiladelphia, PENNSYLVANIA Gumiguru 23rd, 2021. The jam-packed inoratidza misoro yakasiyana-siyana yevanyarikani vepamusoro Sekuru Azeez, Fresh Prince of Africa, Mr. Sirleafson, Cee Y, Mambo Drewwsky, Ofili, Lesley, Setoiyo, uye Dr. Lucas; mazita anozivikanwa zvikuru emumhanzi ane hushamwari hwemhuri naDJ Mezie.
The African Princes of Comedy Tour ine zvese, nemusanganiswa unonakidza wemakomiki anohwina mubairo kune zvinonzwika painternet, vachishanda pamwechete kupa shoo inosetsa. Iyo showa inovimbisa husiku hwekuseka-moto kuseka, inotungamirwa neAPC muvambi uye mutambi Foxy P, anozivikanwa nekuita kwake-kudonha-kudonha uye kusangana kwevanhu vazhinji. Shoo yacho yakazadzwa nemitambo inonakidza isina kumira-mira kuti ienderane nezvinodawirwa nemunhu wese.
Rwendo rwunonanga kuEast Coast, mushure mekuita kwakabudirira muSouth neSoutheast.
Iyo African Princes of Comedy Tour (APCTour) yakavambwa muna 2013 nemutambi Foxy P kubatanidza matarenda evatambi vemuAfrica vanogara mudiaspora. Nekumira zana negumi neshanu mhiri kweUS, UK neCanada, boka rakura kusvika makumi matatu nevaviri vevanyanyi, vachitsigirwa nevateveri 115 miriyoni pasocial media. Vakatamba mumaguta makuru anosanganisira Hollywood CA, New York City, Houston TX, neWashington DC. Vakaitawo kumakoreji ane mukurumbira anosanganisira Princeton, Yale, New York University neHarvard.